[Video] Sary avy amin’ny Tetikasa Fitrandrahana ny Zava-pady · Global Voices teny Malagasy
[Video] Sary avy amin'ny Tetikasa Fitrandrahana ny Zava-pady
Voadika ny 06 Janoary 2011 11:06 GMT
Amin'ny maha-anisan'ny fandraisan'andraikitry ny Rising Voices antsika any Ejipta, izay tanteraka noho ny famatsiam-bola avy amin'ny Heinrich Böll Foundation – Biraom-paritra “Moyen Orient”, nanafatra video telo izahay izay hanome fijery akaiky kokoa amin'ireo tetikasa tsirairay avy. Vao tsy ela izay ny mpanao sarimihetsika Ejiptiana Mahmoud Saber sy ny ekipany no nahavita ireo horonantsary telo izay havoakanay eto amin'ny vohikalan'ny Rising Voices.
Ho an'ireo video telo ireo, nampiasa ny fitaovana Universal Subtitles [Dikanteny iraisam-pirenena] koa izahay hanisiana dikanteny Anglisy. Ahafahana manisy dikanteny amin'ny fomba mora amin'ny tenim-pirenena hafa ity fitaovana iaraha-miasa ity, ary manasa ny mpamaky izahay hanisy dikanteny amin'ny tenim-pirenena hafa.
Ny video voalohany dia manasongadina ny Tetikasa Fitrandrahana ny zava-pady (Taboos) tarihan'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa avy any Nazra, izay nanome fanofanana ho an'ireo Ejiptiana amin'ny fampiasàna ny fitaovana media raitra, ho toerana hiadian-kevitra momba ny resaka zava-pady.
Tsindrio eo amin'ny sary raha hijery ny video (mandefa mankany amin'ny pejin'ny Universal Subtitles ny rohy)